အဟံ - မန္တလေး (အထက်မြန်မာပြည်) ၏ ခြောက်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရှင်သာမဏေ အပါး ၁ဝဝဝ ကို လှူဖွ? - Yangon Media Group
အဟံ – မန္တလေး (အထက်မြန်မာပြည်) ၏ ခြောက်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရှင်သာမဏေ အပါး ၁ဝဝဝ ကို လှူဖွ?
အဟံ-မန္တလေး (အထက်မြန်မာပြည်) ရှင်သာမဏေ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၏ ခြောက်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရှင်သာမဏေအပါး ၁ဝဝဝ ကို လှူဖွယ်ပစ္စည်းများလှူဒါန်းပွဲအား ဇူလိုင် ၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ် (မန္တလေး)ရှိ မဟာဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခမ်းအနားတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သာသနာရေးဦးစီးမှူး ဦးတင်မောင်မြင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အဟံ (ရှင်သာမဏေကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု အ ထောက်အကူပြု) အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမင်းလွင်၊ အဟံ-မန္တလေး (အထက် မြန်မာပြည်) ရှင်သာမဏေကျန်း မာရေးဝန်ဆောင်မှု အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းဆွေဦး၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဧည့်ပရိသတ်များက နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ် (မန္တလေး) ဒုတိယပါ မောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာဥာဏာလင်္ကာရာဘိဝံသထံမှ သြ ဝါဒနာယူကြပြီး လှူဖွယ်ပစ္စည်းများဆက်ကပ်ကြသည်။
”ရှင်သာမဏေလေးတွေ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှ စာပေကျမ်းဂန် တွေလေ့လာနိုင်မယ်။ လိုအပ်တဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့လှူဒါန်းရင် ရှင်သာမဏေတွေအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဟံအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမင်းလွင်က ပြောကြားသည်။
လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲသို့ တက်ရောက်လာကြသူများက မန္တလေးမြို့နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ စာသင်တိုက်များဖြစ် သော အောင်မြေသာစံမြို့နယ်မှ သန္တာရုံစာသင်တိုက်နှင့် ဓမ္မဂုဏ်ရည်စာသင်တိုက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်မှ ဝိဇိတာရုံစာသင်တိုက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှ ဝိသုဒ္ဓါ ရုံကျောင်းတိုက်နှင့် မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်မှ ဓမ္မိကာရာမတိုက်၊ တောင်ထီးလင်းတိုက်၊ မဟာနန္ဒိသေနာရာမတိုက်၊ အာသောကာရာမတိုက်နှင့် ချမ်းသာရကျောင်းတိုက်၊ ပြည်ကြီးတံ ခွန်မြို့နယ်မှ စက်မှုမစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှ လေး ကျွန်းမာန်အောင်စာသင်တိုက်နှင့် ဥယျာဉ်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်မှ မေတ္တာရေ ချမ်းအိုးကျောင်းတိုက်နှင့် စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်မှ ဖာလင်ပိုးပရိယတ္တိစာ သင်တိုက်တို့မှ ပင့်ဖိတ်ထားသော ရှင်သာမဏေအပါး ၁ဝဝဝ အား ဆေးဖိုးအလှူ၊ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်းများကို လှူဒါန်းခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အောင်လံမြို့ စခန်းသာပရဟိတ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ကျောင်းတွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၂၆ဝ ကျော်အား